Noocee Ayey Noqon Doontaa Isku Shaandhaynta Laga Sugayo Muuse Biixi?
Thursday November 07, 2019 - 20:23:19 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu sameeyo isku shaandhayn gun iyo baar ah oo saamaysa xukuumadiisa tayo xumaanta lagu dhaliilayo.
Muuse Biixi oo maalmihii ugu dambeeyey shir isla xisaabtan ah la yeelanayey golihiisa wasiirada ayaa la filayaa in isku shaandhayntiisa uu ku soo beego sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay markii loo dhaariyey talada dalka.
Inkasta oo aanay jirin warar rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada balse xogo la helayo ayaa sheegaya inay miiska saaran tahay isku shaandhayn balaadhan oo muuse biixi ku samaynayo xukuumadiisa laba jirsanaysa.
Isku shaandhayntan ayaa la dhawrayaa qaabka ay u saamayso xilalka tirada badan iyo saamiga dheeraadka ah ee ay haystaan beesha madaxweynaha iyo midka ay gaashaanbuurta ku yihiin siyaasada ee bariga Burco.
Sidoo kale bulshada ayaa dhawraysa in Muuse Biixi xukuumadiisa ka saaro masuuliyiinta aan saamaynta ku lahayn deegaanadooda ee mudada labada sanadood ah horfadhida iyo xubnaha ay dul hoganayaan dhaliiluhu.
Dhinaca kale Muuse Biixi ayaa laga dhawrayaa in isku shaandhayntiisani ay ka jawaabto tabashada balaadhan ee laga muujinayo saami qaybsiga xukuumadiisa.